Ny onin'i Nazca, Nazca - Lima
Toerana: atsimon'i Però, 380 km atsimo-atsinanan'i Lima
Sightseeing: Ny geoglyphs Nazca
Ny saran'ny fitsidihana: sidina iray amin'ny fiaramanidina mitaingina fitsangantsanganana - 350 dolara (olona 5)
Ny tany efitra Nazca dia iray amin'ireo fomba mahagaga indrindra ary miaraka amin'ireo fotoana mahagaga ao Però . Ny arkeolojista, ny angano sy ny mpahay tantara dia mbola tsy takatr'izy ireo hoe avy aiza teo amin'ny lembalemba no niseho sary sy sary maromaro. Nandritra ny fotoana iray dia nanao fihetseham-po marina izy ireo ary nirongatra tao amin'ny sehatry ny siantifika. Maro ireo mpizahatany tonga any Peru mba hahita sary mahatalanjona toy izany ao amin'ny Nazca tany efitra. Ny mandeha amin'ny fandoavana dia tsy natao hanery ny rehetra, fa raha misy olona manapa-kevitra dia hijanona ao amin'ny faritaniny mandritra ny ora roa izany.
Geoglyphs an'ny tany Nazca
Tamin'ny 1939, nitaingina lembalemba tany efitra ny mpikaroka Paul Kosok, nahita ny tsipika hafahafa sy sary tsy mahazatra. Nampahalala an'izao tontolo izao momba izany izy ary nanao hadisoana tanteraka. Ireo tarehimarika ao amin'ny tanin'ny Peroviana Nazca dia nianatra mpahay siansa maro, fa ny tsirairay kosa nitazona ny tanany, niezaka hamaly ny fanontaniana, avy aiza izy ireo. Maro ny safidy: ny vahiny, ny mpino na ny rivotra dia nandao azy ireo, fa ny fanoheran'ireo mpahay siansa hafa dia mametraka ny zavatra rehetra hisalasala. Ny misterin'ny sary famantarana mistery dia mbola tsy voamarina, mihena amin'ny angano sy ny teoria.
Mihoatra ny 30 geoglyphs miaraka amin'ny sarin'ny biby isan-karazany sy ny bibikely, ny tsipika sy ny triatra, sns., Dia napetraka tao amin'ny tany Peroviana ao Nazca. Ny hany mahita azy ireo dia tsy azo atao afa-tsy ny mitsangana amin'ny lanitra.
Fitsangatsanganana tany an-tany efitra
Ny mahita sary manjavozavo eny amin'ny lemak'i Nazca dia sarotra, nefa azo atao. Ao Lima, misy orinasan-tserasera dimy, izay manangona vondrona mpizaha tany kely isan-andro. Ny fitsangatsanganana ny tanin'ny Peroviana Nazca dia atao amin'ny sambo na amin'ny fiaramanidina kely. Ny vidin'ny sidina dia 350 dolara. Raha ny fitsangatsanganana dia ilaina ny mangataka mandritra ny 2-3 andro, satria voafetra ny isan'ny mpandeha ao anaty fiaramanidina (olona 5), ​​ary ireo izay maniry betsaka. Ao amin'ny masoivoho dia azonao atao ihany koa ny mandamina ny galeran'ny efitra amin'ny helikoptera. Mazava ho azy, io fahafinaretana io dia miteraka vola be - 500-600 dolara.
Fialan-tsasatra any an-tany efitra no natao tamin'ny volana Desambra, raha kely ny haavon'ny rivotra ka hatramin'ny 27 degre. Amin'ny volana sisa amin'ny herintaona dia saika tsy ho vita mihitsy ny any. Alohan'ny handehanana mitsidika dia mila manao akanjo tsara ianao. Fidio ny fitafiana maivana, avy amin'ny fitaovana maivana, kiraro mihidy miaraka amina tokotanitra sy foza misy maramara.
Aiza ny alan'i Nazca?
Ny efitra tany Nazca ao Però dia 380 km miala an'i Lima . Raha mandeha fiara liana ianao , dia tonga any, mila mifidy lalana 1S, akaikin'ny Oseana Pasifika. Avy any Lima ianao dia afaka mandeha any amin'ny tany efitra amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka , fa miaraka amin'ny famindrana any amin'ny tanànan'i Ica . Avy eo an-drenivohitra mankany Nazca eny an-dalana dia handray adiny valo ora.
Fitiavana stomatitis amin'ny saka
Sakafo be ravina - fanaka
Sampana plastika ho an'ny trano fonenana
Mpikarakara ny fihetseham-po tsara amin'ny tanany manokana
Lamina mahafinaritra ho an'ny efitrano
Ny tolotra lehibe indrindra manerantany
Ny fitondrana vohoka amin'ny עקטopika - fitsaboana
Piroplasmosis amin'ny saka
Rovety amin'ny tantely amin'ny fampijaliana mandritra ny fitondrana vohoka
Ilaina ilaina amin'ny tongolobe
Misara-panambadiana amin'ny vanim-potoana iray tsy misy fanadiovana
Tazo mitahiry ronono - tsara sy ratsy
Misaotra amin'ny olona
Mangatsiaka amin'ny saka - soritr'aretina
Tsy afaka omena ianao, manary: 20 ny ankamaroan'ny fanomezana tsy misy dikany amin'ny Taombaovao